News – Page 21 – King Of Future
အိန္ဒိယတွင် coronavirus ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ၅၀၀,၀၀၀ကျော်အထိမြင့်တက်လာပြီး မြို့ကြီးများတွင် ပိုမိုကူးစက်လာလျက်ရှိနေ
61 Comments	/ News / By codexmyanmar
Indiaနိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၄နာရီအတွင်း coronavirus ကူးစက်မှုပေါင်း ၁၇၀၀၀ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နိုင်ငံတွင်းစုစုပေါင်း ၅၀၀၀၀ကျော်ပမာဏအထိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဟု ဗဟိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ထုတ်ပြန်သည့် အချက်အလက်များအရ သိရှိရသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စတုတ္ထမြောက်အကြီးမားဆုံးရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်နေသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဘရာဇီးနှင့်ရုရှားနိုင်ငံများနှင့်ယှဉ်လျှင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စတုတ္ထမြောက်အကြီးမားဆုံးရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်နေသည်။ အိန္ဒိယတွင် ရောဂါကူးစက်မှုဆက်တိုက်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရကို အကြံပေးတဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ယခုအခါအာဏာပိုင်များသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျံ့နှံ့ခြင်းကြောင့် သေဆုံးမှုလျှော့ချခြင်းကိုသာ ဦးစားပေးသင့်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အဓိက coronavirus အလုပ်အဖွဲ့နှင့်ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာအမျိုးသား Insitute ၏ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ Manoj Murhekar က “ လူအများအပြားသေဆုံးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်အောင်မပြုလုပ်သင့်ပါ ”ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်မှ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာပါမောက္ခ Bhramar Mukherjee ဦးဆောင်သော COV-IND-19 လေ့လာရေးအဖွဲ့ကဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၇၇၀,၀၀၀ နှင့် ၉၂၅,၀၀၀ ကြားတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ကူးစက်ရောဂါများ လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ …
အိန္ဒိယတွင် coronavirus ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ၅၀၀,၀၀၀ကျော်အထိမြင့်တက်လာပြီး မြို့ကြီးများတွင် ပိုမိုကူးစက်လာလျက်ရှိနေ Read More »
ပြည်နယ်ပေါင်း(18)ခုမှာ မဲရေတွက်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် Biden က ဦးဆောင်နေ
58 Comments	/ News / By codexmyanmar
ယခုအချိန်တွင် U.S သမ္မရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲရေတွက်နေပြီဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိ ပြည်နယ်(18)ခုတွင် မဲရေတွက်ပြီးစီးလုနီးပါးအချိန်၏ ရလဒ်တွင် ဒီမိုကရက်တစ် ကိုယ်စားလှယ် Joe Biden က ရီပတ်ဘလီကန် သမ္မတ Donald Trump ကို ဦးဆောင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ Washington D.C,New York, New Jersey, New Mexico ပြည်နယ်များတွင် Biden က အနိုင်ရနေပြီး South Dakota, North Dakota,Wyoming,Louisiana နှင့် Nebraska ပြည်နယ်များတွင်မူ Trump က အနိုင်ရထားသည်။ အဓိကကျသော မဲယိမ်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Florida တွင်မူ Trump ကအသာရထားကြောင်း သိရှိရသည်။ မဲယိမ်းပြည်နယ်များဖြစ်သည့် ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ အရီဇိုးနား၊ တက္ကဆက်တိုတွင် အကြိတ်အနယ် ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နေကြသည်။ …
ပြည်နယ်ပေါင်း(18)ခုမှာ မဲရေတွက်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် Biden က ဦးဆောင်နေ Read More »
64 Comments	/ News / By codexmyanmar
အဓိကစီးပွားရေးနိုင်ငံများမှ စက်ရုံမှထွက်ရှိသည့် ခိုင်မာသောအချက်အလက်များကြောင့် အမေရိကန်ရှယ်ယာဈေးကွက်များမှာ အင်္ဂါနေ့တွင် အနည်းငယ်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ရွှေ နှင့် ဒေါ်လာ တိုမှာ U.S ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ S&P 500 futures ဟာ(0.5)%၊EUROSTOXX 50 futures (STXEc1) ဟာ (0.8)% နှင့် FTSE futures ဟာ (0.9)% အသီးသီး မြင့်တက်ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားသူများစွာသည် မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပေါ်နေသော ရက်သတ္တပတ် ကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးနောက် မတည်ငြိမ်မှုမှာ ရေတိုအတွင်းသာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားခဲ့ကြသော်လည်း ခိုင်မာသည့် ဈေးကွက်ပွင့်လင်းမှုကို ပြသခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မတ Donal Trump နှင့် ဒီမိုကရက်တစ် ပြိုင်ဘက် Joe Biden တို၏ ရွေးကောက်ပွဲ …
အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ပြောင်းလဲလာနိုင်သည့် Forex Marketကြီး ၏ အခြေအနေ Read More »
11 Comments	/ News / By codexmyanmar
?? Novemberလ(3)ရက် Tuesday မနက်(6:30)အချိန်တွင် U.S President Election သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Novemberလ(3)ရက် Tuesday မနက်(10:00)အချိန်တွင် Novemberလအတွက် RBA Interest Rate Decision သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?? Novemberလ(3)ရက် Tuesday မနက်(10:00)အချိန်တွင် RBA Rate Statement သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ _______________________________ ? Dataထွက်ရှိသည့်အခါ အထက်ပါငွေကြေးအတွဲများ လှုပ်ခတ်နိုင်ပါသည်။ ❤️❤️❤️ Traders များအကျိုးအမြတ် ရကြပါစေ။
Novemberလ(2)ရက် Monday မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လယ်(3:25)အချိန်တွင် Octoberလအတွက် German Manufacturing PMI သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Novemberလ(2)ရက် Monday မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လယ်(4:00)အချိန်တွင် Octoberလအတွက် Manufacturing PMI သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Novemberလ(2)ရက် Monday မြန်မာစံတော်ချိန် ည(9:30)အချိန်တွင် Octoberလအတွက် ISM Manufacturing PMI သတင်းထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ___________________________________ Dataထွက်ရှိသည့်အခါ အထက်ပါငွေကြေးအတွဲများ လှုပ်ခတ်နိုင်ပါသည်။ Traders များအကျိုးအမြတ် ရကြပါစေ
ဥရောပ နဲ့ U.S မှာ Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုများပြားလာခြင်းနဲ့အတူ ရွှေဟာ သောကြာနေ့မှာ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ရွှေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ မနက်(12:36) (GMT: 3:36) မှာ 0.33% အမေရိကန်ဒေါ်လာ (1,908.30) ထိ ရောက်ရှိကျဆင်းသွားပါတယ်။ သိုပေမဲ့လည်း သောကြာနေ့မှာ ဒေါ်လာဈေး အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုးမှုတွေ ကျဆင်းသွားပါတယ်။ U.K နဲ့ ပြင်သစ်ကဲ့သိုသော ဥရောပနိုင်ငံများဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံမှုကို တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် အသစ်အသစ်သော ကန့်သတ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ အပူချိန်ကျဆင်းသောကြောင့် Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုများ များပြားလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ အောက်တိုဘာ(16)ရက်အထိ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုပေါင်း (7.9)သန်းကျော် နဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပေါင်း (38.8)သန်းကျော်အထိ ရှိကြောင်း John Hopkins တက္ကသိုလ်မှ အချက်အလက်များအရ …
ဥရောပနဲ့အမေရိကန်မှာ Covid-19 ဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်လာခြင်း နဲ့ ရွှေရဲ့အလားအလာ Read More »